एनआरएनए हाँक्न ‘कन्फ्युज’ छैन : डा. बद्री केसी – PrawasKhabar
एनआरएनए हाँक्न ‘कन्फ्युज’ छैन : डा. बद्री केसी
२०७८ भदौ १० गते ११:०२
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन मिति नजिकिदै छ। यसपटक अनलाइनमार्फत निर्वाचन हुने भएको छ। त्यसकारण यो महाधिवेशनले धेरै उत्साह थपेको छ।
विदेशमा बस्ने नेपालीको हक हितका लागि आवाज उठाउँदै आएका डा. बद्री केसी संघको आगामी कार्यकालको लागि नेतृत्वका प्रत्यासी हुन्।
संघका उपाध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार तथा कल्याकारी विभागका प्रमुख समेत रहेका डा. केसी विगत ३१ वर्षदेखि रसियामा बस्दै आएका छ । आउँदो निर्वाचनमा उनको उम्मेदवारी तथा आगामी योजनाकाबारेमा गरिएको कुराकानीको अंशः
तपाई पछिल्लो समय काठमाडौं केन्द्रीत हुनुहुन्छ किन ?
लामो समय कोरोना भाइरसको कारणले नेपाल आउन पाएको थिएन। नेपाल सरकारसँग संस्थागत कुराहरु पनि तय गर्नुपर्ने छ। र, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशनको तयारीका लागि पनि म काठमाडौं आएको हुँ।
हाम्रो आठ वटा विभागहरु छन्। जसमध्ये वैदेशिक रोजगार तथा कल्याकारी विभागको म प्रमुख हुँ। यो विभागमा चारवटा उप कमिटीहरु छन्। यी कमिटीमध्ये पहिलो वैदेशिक रोजगारमा गएका साथीहरुको समस्या केलाएर नेपाल सरकारसँग लबिंग गर्ने, हाम्रो संविधानमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारसहित नागरिकता दिने भनेको छ त्यो नागरिकता हामीले पाएका छैनौं त्यसको लबिंग गर्ने, त्यस्तै, गैर आवासीय नेपालीहरुका लागि छुट्टै कानुन बन्ने छ त्यो कानून बनाउनका लागि पनि मैले लबिंग गरिरहेको छु र विदेशमा रहेका नेपालीहरु जो महामारीको चपेटमा पर्नु भएको छ उहाँहरुको लागि हामीले थुप्रै काम पनि गरिरहेका छौं।
एनआरएनएले कस्ता खाले रुपान्तरण गर्छ ?
गैरआवासीय नेपालीहरुको योगदान धेरै छ, नेपाल सरकारले कसरी हेर्छ तपाईहरुलाई ?
तपाई आगामी कार्यकालका लागि नेतृत्वको प्रत्यासी हुनुहुन्छ । अध्यक्ष पद नै किन रोज्नु भएको हो ?
गैरआवासीय नेपाली संघको अभियान सुरु गर्दादेखि नै म यहाँ छु। सुरुका दिनमा म साधारण सदस्य मात्र रहेर काम गरे। २००७ मा रसियाको महासचिव थिए। त्यसपछि दुई कार्यकाल म केन्द्रीय सदस्य भए। २०१३, २०१५ मा कोषाध्यक्ष थिए। त्यसपछि दुई कार्यकालमा म महासचिव भएर काम गरे। त्यसपछि २०१९, २१ मा म उपाध्यक्ष छु। त्सकारण मैले एनआरएनएमा नसम्हालेको पद छैन। मैले योसबै पदमा जितेर आएको छु। त्यसैले एनआरएनएमा रहेर थुप्रै काम गरेको छु। यो संघको विभिन्न पदमा रहेर कामलाई निन्तरता दिँदै आएको छु। त्यसैले कुनै चर्चा पाउनका लागि होइन मेरो दाबेदारी वास्तबिक हो।
तपाईलाई जिताउने पर्ने आधार ?
संस्थालाई आर्थिक रुपले कसरी लैजाने भन्नेमा म कन्फ्युज छैन। किनभने यो संस्थाको जन्म भएको दिनदेखि म यस संस्थामा छु। यहाँ रहेर धेरै दुःखका दिनहरु पनि देखेको छु। २०१३ सालमा हामीले हाम्रा सचिवालयका सदस्यहरुलाई तलब खुवाउन पनि चन्दा उठाउन पर्थ्यो। म त्यो बेला कोषाध्यक्ष थिए।
यस्तो खालको सामाजिक संस्थालाई आर्थिक रुपले सक्षम बनाउन सक्ने १० वर्षे योजना मैले बनाए। र, यहीं योजनाकै क्रममा भिजन २०२० पनि लिएर आएँं र आज यो संस्था एक वर्षमा ५० करोडको च्यारिटीको काम गर्न सक्ने भएको छ। त्यसैले संस्थालाई कसरी आर्थिक रुपले सक्षम बनाएर लैजाने भन्नेमा म कत्ति पनि कन्फ्युज छैन। यो संस्थालाई सबै कुराबाट सक्षम बनाएर संस्था हाक्न सक्ने मापदण्ड म मा छ।
यस्तै, म कोषाध्यक्ष भएर काम गर्नु भन्दा पहिले केन्द्रीय सदस्य भएर काम गर्दा संस्थामा ४०,४५ वटा मात्र देशहरु थिए। त्यसपछि म महासचिव भएर काम गर्दा कमसेकम ३० वटा नयाँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् खुल्यो। यसरी म महासचिव हुँदा कसरी धेरै भन्दा धेरै देश तथा नेपालीहरुलाई आबद्ध गर्ने भन्नेमा विषयमा मेरो ठूलो योगदान रह्यो। सुरुमा हाम्रा साधारण सदस्यहरु कम थिए। अहिले १ लाख १० हजार साधारण सदस्यहरु मात्र छन्। म महासचिव हुँदा म लगाएत मेरो टिमले एकदम उत्कृष्ट काम गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारमा केके समस्या छन् भनेर हामीले एक हप्ता अघि मात्र श्वेत पत्र जारी गरेका छौं। अब अर्को उपाध्यक्ष आउँदा अलमल हुनु पर्दैन। यी आठ वटै विभाग, ४० वटा कमिटीहरु र ८४ वटा देशहरुलाई म कन्ट्रोल गर्न सक्छु। र, ती देशहरुमा बसेका नेपालीहरु पहिले आफैं सक्षम हुनुपर्छ अनि नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ यी सबै कुराहरुलाई व्यवस्थापन गरेर म लैजान सक्छु भनेरै मैले अध्यक्ष पदको लागि आँट गरेको छु। साथीहरुले मलाई जिताउनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
आगामी नेतृत्वका लागि बद्री केसी साझा उम्मेदवार, कुमार पन्तलगायत पूर्व अध्यक्षहरुको समर्थन
एनआरएनको भावी अध्यक्षको स्वभाविक उम्मेदवार म हुँः डा.बद्री केसी
डा. केसी भन्छन्– बौद्धिक तथा श्रमिक साथीको सहयोगले चुनाव जित्नेमा ढुक्क छु
डा.केसीको समूहबाट को–को बन्दै छन् उपाध्यक्ष ?
एनआरएनए चुनाव : यी हुन् अध्यक्षका दावेदार डा।बद्री केसीका सारथी
एनआरएनए निर्वाचन : जनप्रगतिशिल मञ्च पक्षधर डा. केसीको पक्षमा